Fivavaka amin'ny Anima irery mba hahatongavan'ny olona iray [+]?
Ny vavaka aminny fanahy fotsiny mba hahatonga ny olona iray ho tonga Mety ho io fitaovam-piadiana miafina izany izay manampy antsika amin'ny fotoana izay tsy ahitan'ny olon-kafa azy.
Amin'izay fotoana izay dia irintsika amin'ny fanahintsika rehetra ny hahita an'io olona io nefa tsy fantatsika ny atao na ny fomba hanaovana azy dia izy no manapa-kevitra ny tenany ho tonga hahita anay, dia vavaka io mety ho mahasoa antsika amin'izao fotoana izao.
1 Ny vavaka amin'ny fanahy irery hahatonga ny olona hahatongavana ho an'ny inona?
1.1 Ny vavaka aminny fanahy fotsiny mba hahatonga ny olona iray ho tonga
3 Mahery ve ity vavaka ity?
Ny vavaka amin'ny fanahy irery hahatonga ny olona hahatongavana ho an'ny inona?
Miasa be izy io mba hanaovana an'io olona io andao hitsena anay mba hampifandraisana azy amintsika.
Ny filàna natsangana ao amin'io olona io mba hahita antsika dia mitombo hatrany mandra-pahatongany mitsidika antsika dia tsy azo ihodivirana.
Fitaovana mahery azontsika ampiasaina amin'ny finoana isaky ny tiantsika, na inona na inona isan'andro.
Anima Sola, ry olo-masina voatahy, miangavy anao aho amin'ny finoana lehibe mba hahatonga ity olona ity ...
(anarana feno ilay olona)
Niverina tamin'ny sandriko aho, fa manomboka anio dia tsapako fa mbola mifamatotra amin'ny fatoram-pitiavana aho, mangataka aminao aho, ny herinao lehibe mba hiverina miaraka amin'ny fo malalaka mankaty amiko ary tsy misy na inona na inona mandrisika anao amin'ny tenako, fa manohy mitia ahy amin'ny fanahy, vatana sy fanahy ianao , manomboka izao ka ho mandrakizay.
Miangavy anao amin'ity vavaka ity amin'ny fanahy fotsiny aho mba hahatongavan'ny olona iray, Anima Alone, ampio aho.
Miangavy anao aho, miaraka amin'ny finoako, Anima Alone, mba hanao, miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana mahagaga anao, fa ny olona tiako dia miverina ato an-tsaiko, miaraka am-po feno fitiavana sy fahatakarana izany.
Mifalia, irery, ataoko aminao ity vavaka ity, izay nanalavitra ahy, miangavy anao aho, aza manadino ahy fa ao an-tsainao foana aho.
Ary mampanantena anao aho fa raha vao miverina io olona io,, Hataoko manaraka ireto manaraka ireto, _misaotra
Tsarovy fa tsy misy tontolo iainana na andro manokana na hanaovana an'io vavaka io.
Afaka mandeha amin'ny fotoana na toerana rehetra izany.
Raha te handrehitra labozia ianao na manao atmosfera kely kokoa alohan'ny hivavaka, tsara izany, saingy tsy izany no hahatonga ny vavaka ho kely kokoa na mahery vaika.
Fomba manokana natao amin'ny tranga izay misy olona akaiky na nalaina an-keriny an-trano ary ampiharina amin'ny biby sasany ihany koa.
Mahagaga ny hery sy ny mandaitra an'io vavaka io, na manao ahoana na manao ahoana sarotra amin'ny fahagagana.
Tokony hivavaka isan'andro isika. Mila mino ny vavaka isika ary mino.
Raha tsy manam-pinoana isika dia tsy hoentina hokarakaraina.
Heverinao fa hihazakazaka tsara izany. Fa misy olona handre anao ary hanampy amin'ny fangatahanao.
Mivavaha indray mandeha isan'andro, amin'ny finoana sy ny tanjaka. Fotoana fohy dia ho karakarainao ny didinao ary ho faly ianao.
Raha mila ianao dia mandrehitra labozia fotsy na labozia mena misy hisaorana.
Lamba manompo tolotra amin'ireo vondron'olona manampy antsika amin'ny baikontsika.
Zavatra tsotra ihany izany, nefa tena mahomby.
Ny tontolo Ny ara-panahy dia zava-misy iaharan'ny manodidina antsika ary ny tsy faniriantsika handray azy io ho zava-dehibe dia tsy midika hoe tsy misy izany, izany no mahatonga ny fanaovana ireo fitaovana ara-panahy ireo ho lasa matanjaka be.
ny vavaka vita amin'ny fanahy dia miaraka amin'ny hery manokana satria tsy misy toa ny fahatsoram-po rehefa miresaka amin'ny fanahy.
Izany fitsipika mahafeno ny vavaka rehetra atao amin'ny fiainana, na iza na iza io, tokony hatao miaraka amin'ny finoana foana izy ireo satria io no fepetra takiana hahazoana antoka fa hahazo valiny ny vavaka.
Mivavaha am-bavaka fotsiny ho an'ny fanahy mba hahatonga ny olona ho tonga amin'ny finoana. Dia ho tsara ny zava-drehetra.